UJudit Murcia -I-Creativos ekwi-Intanethi https://www.creativosonline.org Uyilo lwegraphic kunye noyilo lwewebhu NgoLwesibini, 18 Jun 2019 17: 35: 47 + 0000 es ngehora	1	https://wordpress.org/?v=5.7.2 https://www.creativosonline.org/wp-content/uploads/2020/05/cropped-favicon-150x150.png UJudit Murcia -I-Creativos ekwi-Intanethi https://www.creativosonline.org 32 32 Uwugqwetha njani umhlaba womfanekiso kwiFotohop https://www.creativosonline.org/como-falsear-el-suelo-de-una-imagen-en-photoshop.html https://www.creativosonline.org/como-falsear-el-suelo-de-una-imagen-en-photoshop.html#respond NgoLwesibini, 18 Jun 2019 17: 35: 47 + 0000 https://www.creativosonline.org/blog/?p=48671
Ufumene umfanekiso ogqibeleleyo weprojekthi yakho, kodwa xa uyibeka kuyilo uyaqonda ukuba ufuna ubunzulu obungaphezulu, oko kukuthi, ukwandisa imigangatho kunye neendonga. Ngaba ufanele ulahle loo foto? Impendulo nguhayi ". I-Photoshop sisisombululo kwingxaki yakho.
Funda uku fake emhlabeni kunye Photoshop usebenzisa izixhobo ezichanekileyo ukuze ungalahli ubunzulu kwaye ngaphezu kwako konke, ukuhlonipha amanqaku atshabalalayo, umbono wokuqala womfanekiso wakho.
Lungisa uxwebhu kwi-Photoshop
Khetha umfanekiso ofuna ukukwenza ubungakanani kwakhona kwaye uvule nge-Photoshop. Sicebisa ukuba ngaphambili ubenombono, ngaphakathi kwendibano esifuna ukuyenza, indawo ekufuneka siyonyusile ukuze singasebenzi kakhulu.
Simele yandisa iseyile Umsebenzi kuba sifuna ukwandisa umfanekiso, ke ngoko, siya kufuna umda wokuhlela. Ukwenza i-canvas ibe nkulu, kufuneka silandele le ndlela ilandelayo:
Umfanekiso - Ubungakanani beCanvas
Ukongeza, kuluncedo ukuphinda ikopi yomfanekiso wokuqala, ukuwugcina ugcinwe kwimeko apho sifuna khona. Ngelixa sisebenza, nanjengoko ikukukhusela, siyakufihla.
Inkcazo yesakhelo: Indawo yokuphela
Ukusebenzisa esi sixhobo siya kufikelela kwindlela:
Icebo lokucoca ulwelo-Indawo yokutshabalala
Okokuqala, siza kwenza ifayile ye- inkcazo emfutshane yamaqhosha ukuba sizakufumana kwiwindow entsha ezakuvela.
A. Imenyu yendawo yokulahleka B. Khetha C. Isixhobo sebhokisi D. Ukulahleka kweseshoni yenqaku lokuqala
Yenza uyilo lombono wethu
Inyathelo lokuqala kukwenza inqwelomoya, Oko kukuthi, phawula umbono onomfanekiso wethu. Kule nto siza kusebenzisa isixhobo esisifumana ecaleni (icandelo C).
Ngesi sixhobo kuya kufuneka uphawule amanqaku yenza iindawo ezichasayo ezichasayo I-Photoshop iya kusebenza ngayo. Elinye iqhinga kukuzikhokela imigca kunye neekona zomfanekiso ngokwawo.
Nge Isixhobo sesixhoboNjengoko siyisebenzisa kwibar yesixhobo ngokubanzi, siya kuyisebenzisa ukuphinda-phinda umgangatho okanye iindonga esizifunayo. Kuya kufuneka uhambe nenkathalo eninzi imigca ilingane ukuze iziphumo zibe zezona zibalaseleyo. Khumbula ukuba kuthatha umonde omkhulu.
Zama ukusebenzisa esi sixhobo ngamanyathelo asisiseko esikubonise wona, uya kufunda ukuba uwasebenzise ngokwenza. Musa ukudimazeka ukuba awufumani iziphumo ezilindelekileyo okokuqala.
]]> https://www.creativosonline.org/como-falsear-el-suelo-de-una-imagen-en-photoshop.html/feed 0 Uhlela njani iividiyo kwiFotohop https://www.creativosonline.org/como-editar-videos-en-photoshop.html https://www.creativosonline.org/como-editar-videos-en-photoshop.html#respond Mon, 06 Meyi 2019 08:43:26 +0000 https://www.creativosonline.org/blog/?p=48517
]]> https://www.creativosonline.org/como-editar-videos-en-photoshop.html/feed 0 Funda indlela yokusebenzisa isixhobo seFotohop's 3D https://www.creativosonline.org/aprende-a-utilizar-la-herramienta-3d-de-photoshop.html https://www.creativosonline.org/aprende-a-utilizar-la-herramienta-3d-de-photoshop.html#respond Mon, 29 Aprili 2019 11:51:22 +0000 https://www.creativosonline.org/blog/?p=48490
Ngaba uyazi ukuba ungadala Izinto ezingama-3d ngezixhobo zoyilo? Nge-Photoshop ikuvumela ukuba wenze imimangaliso ngokukhawuleza, ngokulula kwaye ngaphandle kokwazi okuphezulu kwesixhobo.
Sikunika imeko esebenzayo ukuze uqonde ukusetyenziswa kwesixhobo kunye nawo onke amathuba. Kule meko, siza kwenza ibhola yehlabathi kwimizuzu nje embalwa.
Izinto eziphathekayo into esiza kuyidinga iya kuba yiyo umfanekisoKule meko, imephu yehlabathi kwifomathi ye-png, oko kukuthi, ngaphandle kwemvelaphi. Nje ukuba sibe nefayile siya kuyivula kwaye Siza kukhetha iileya zakho. Eyona ndlela ikhawulezayo kukusebenzisa isixhobo "sokhetho olukhawulezayo". Inguqulelo entsha yenkqubo ivumela ukuba sikhethe izendlalelo zayo ngendlela elula negqibeleleyo ngeqhosha elibonakala phezulu kwimenyu: Khetha kwaye usebenzise imaski.
Faka isicelo umnatha
Isinyathelo esilandelayo ukulandela, ukuba nefayile ekhethiweyo iya kuba yenza umnathaOko kukuthi, isiphumo se-3D. Kufuneka silandele indlela elandelayo, njengoko sibonisa kumfanekiso:
Umnatha omtsha ovela kuLuhlu- iMesh ukuseta ngaphambili- iSphere.
Iziphumo ze ibhola yehlabathi ngokuzenzekelayo.
Xa usenza into ye-3D, iwindow iya kuvela apho sinokugqiba khona nembono sifuna ukubona kwicandelo. Ukongeza, ngempuku esinakho jikelezisa into kwaye ubone bonke ubuso babo kule ndawo siyifunayo.
Iimpawu zemephu yethu ye3D
Ukunika ukugqibezela okungakumbi, sinokuyiguqula iipropathi zomaleko. Umzekelo, yenza isigqibo ngombala wangasemva wenqanaba. Njengoko sibonisa emfanekisweni, kunokwenzeka faka umbala oyifunayo ngombala okhethiweyo ovela kwimenyu esecaleni.
Ngapha koko, kufuneka siyikhumbule into yokuba, ukuba sifuna ukufaka le nto kwimvelaphi engekho tyaba, umzekelo, yenza indlela yokubukeka egumbini, kufuneka sithathele ingqalelo ukukhanya. Kuxhomekeke koku, isithunzi sebala kufuneka sisetyenziswe kwelinye icala okanye kwelinye. Kule meko songeze ezantsi ethe tyaba.
Njengoko ukwazile ukuqaphela, kulula kakhulu ukuyenza kwaye isiphumo sobungcali kwaye kakhulu iluncedo kwiiprojekthi ezahlukeneyo zemizobo.
Yenza into yakho ye3D kwimizuzu embalwa!
]]> https://www.creativosonline.org/aprende-a-utilizar-la-herramienta-3d-de-photoshop.html/feed 0 INetffix inoluhlu lwezinto eziyiliweyo https://www.creativosonline.org/netlfix-series-creativos.html https://www.creativosonline.org/netlfix-series-creativos.html#respond Mon, 22 Aprili 2019 08:00:52 +0000 https://www.creativosonline.org/blog/?p=48394
Ngaba uyayithanda uthotho? Ngaba uyazi ukuba kukho amaxwebhu ezinto eziyiliweyo? Ngeli xesha siza kuphula umkhonto endaweni yeqonga losetyenziso lwee-audiovisual ezisetyenziswayo namhlanje: Netflix.
Ukuba uyawuthanda umxholo wee-audiovisual, ungatyala imali ekufundeni nasekukhuleni ngokwakho ngamanye amaxwebhu asinika wona. Sithetha ngomnye ngokukodwa onesihloko esithi "Abstract: Ubugcisa boYilo”. Kuluhlu lwamaxwebhu abonisa amagcisa kwicandelo loyilo. Zizahluko ezizimeleyo, ke sinokubona ezona zinto zitsala umdla wethu.
Umxholo we "Abstract"
Izahluko ezahlukileyo zigxile kuyilo lwe iinkalo ezahlukeneyo Ezibandakanya uyilo lwegraphic, ukufota, umzekeliso, izithuthi, uyilo lwangaphakathi, uyilo lokuseta kunye noyilo lwezihlangu.
Emva kweminyaka emibini yomsebenzi, kunye nomgangatho opholileyo apho sifumana khona Ababhali ababalaseleyo kwilizwe loyilo, Le mveliso ijolise kakhulu kulindelo.
Ixesha lokuqala liqala ngesahluko semizuzu engama-47 esibonisa umhlaba womzobi uCristoph Niemann. Isibonisa inxenye encinci yobomi begcisa, kunye neeprojekthi zokwenyani asebenza kuzo. Ukucacisa ngakumbi, i ukufihla "INew Yorker”Kwafuneka ajongane nomceli mngeni wokuyila kwakhe ikhava yedijithali yokuqalaOko kukuthi, okwenyani okungathandabuzekiyo. Ukuwujonga cofa apha kwaye uza kubona ubukrelekrele balo msebenzi.
Kulandelwe esinye isahluko esixelela ngenkqubo yoyilo yoyilo Tinker hatfield Kunye nezihlangu zohlobo oludumileyo lweNike. Sikwafumana i-spenary designer efana ne-Es Devlin, i-architects, abafoti kunye nezinye iiprofayili.
Masidibane nombhali wayo
Olu luhlu lwamaxwebhu belukhona yenziwe nguScott Dadich, umntu owenza izinto ezininzi njengoko eyile, engumhleli, umbhali kunye nomenzi wefilimu. Ungusomashishini ukusukela ebutsheni bakhe. Uhleli ekuqonda ukubaluleka kunye nefuthe lobuchwepheshe kwishishini nakwintlalo.
UScott Dadich waphungula ngokudlula kwakhe njenge umhleli oyintloko kumagazini iWIRED. Okwangoku waba nguvulindlela kuphuhliso lweapps yemagazini yeApple. Yayenye yeefayile ze- upapasho lokuqala ukufaka umxholo wabo kwi-iPad.
Ngomnqweno wawo onke la magcisa, siyakukhuthaza ukuba ufumane olu xwebhu lutsha. Awuyi kuphoswa yidosi yobugcisa kunye nenkuthazo yokuqhubela phambili kwaye uyinike inqaku ubuchule ebomini bakho.
]]> https://www.creativosonline.org/netlfix-series-creativos.html/feed 0 Ukuba ngumthengisi kuyilo lwethu: lungelelanisa kwaye usasaze https://www.creativosonline.org/herramienta-alinear-y-distribuir.html https://www.creativosonline.org/herramienta-alinear-y-distribuir.html#respond Mon, 15 Aprili 2019 14:03:19 +0000 https://www.creativosonline.org/blog/?p=48378
Ngaba kuya kufuneka uyile ipowusta, iflaya, uqengqele phezulu? Funda ezinye Amaqhinga okuphumeza ukuchaneka okukhulu phakathi kwezinto kwaye ulungelelanise ngokukhawuleza. Kubalulekile ukuba yonke into igxile ngaphakathi kunye nebhokisi enye kwenye.
Xa siyila iprojekthi kwi-Illustrator esinokuyisebenzisa herramientas oko kuyakusinceda ukuba sihambelane izinto ezahlukeneyo ezenza iqhekeza lethu. Ukongeza, iyakusivumela ligcine ixesha. Emva koko, sikubonisa ifayile ye- isifundo esifutshane ukuze ufunde ukuzisebenzisa.
Okokuqala, siya kukubonisa ukuba ungasifumana phi esi sixhobo. Kuya kufuneka uye kwimenyu ephezulu, kwithebhu "ifestile" kwaye ujonge ukhetho "ukwenza umgca. Kuyacetyiswa ukuba nendlela emfutshane yesi sixhobo kwindawo yokusebenza, kuba nje ukuba ufunde ukuyisebenzisa iya kuba yimfuneko.
Te iwindow iya kuvela apho unokukhokelwa ziimpawu zeqhosha ngalinye ukuqonda ukuba loluphi uphawu lwazo: lungelelanisa ekhohlo, embindini, phakathi kwabanye.
Xa sine izinto kwitafile yomsebenzi kufuneka bakhethe. Kuphela zizo sifuna ukulungelelanisa enye nenye. Ukukhetha ngaphezulu kwento enye, siya kubamba iqhosha le "shift" kwaye ucofe kuzo zonke izinto esifuna ukuzikhetha. Ukuwuqonda ngokulula lo mxholo, sincamathisela umfanekiso ongezantsi obonisa oku kuchazwe apha ngasentla.
Lungelelanisa kwaye usasaze
Kwiwindow yezixhobo iyasivumela: lungelelanisa kwaye usasaze. Umahluko phakathi kwezi zinto zombini ulula.
Ukulungelelanisa: Izinto zinokulungelelaniswa kuwo omabini amacala ebhokisi yokubopha into, okanye embindini wayo ngokuthe nkqo nangokuthe tye.
DHambisa: Ngokusebenzisa olu phawu senza izinto ezikhethiweyo zihlale kumgama omnye kwisithuba esikhethiweyo okanye kwibhodi yezobugcisa. Oko kukuthi, ukuba sikhetha ukhetho "Hambisa ngasekhohlo", phakathi kwecala lasekhohlo lento kunye nento elandelayo ekhethiweyo kuya kubakho umgama ofanayo phakathi kwabo.
Lungelelanisa ne ...
Kubaluleke kakhulu ukuba sikhethe ukhetho oluchanekileyo ngokwenjongo yethu. Sibhekisa kwithebhu "Nxibelelanisa”Okuya kusinika ukhetho phakathi:
Lungelelanisa kwinto ephambili
Lungelelanisa nebhodi yezobugcisa
Ukuba nokukodwa okanye okwahlukileyo okhethiweyo kuya kusinika iziphumo ezahluke ngokupheleleyo, ke, qinisekisa ukuba eli candelo liphawulwe kakuhle.
Ngesixhobo «Ukulungelelanisa» nayo singasasaza imigama ngaphakathi kwiqela lezinto kunye nezithuba eziphakathi kwazo. Umzekelo, njengoko sinokubona kumfanekiso ongezantsi, sineempawu ezintathu zokuhambisa kwitafile yomsebenzi. Ukuba sifuna ukuqinisekisa ukuba indawo phakathi kwabo iyafana, kwaye sifezekise uyilo oluhambelanayo, kufuneka silandele la manyathelo alandelayo:
Khetha zonke izinto ezinqwenelekayo.
Yiya kwindawo yesixhobo.
Ukhethe ukhetho: Lungelelanisa nokukhetha.
Cofa kwindawo okhetha kuyo: Sasaza isithuba ngokuthe tye.
Ukulandela la manyathelo siza kuba nezinto zibekwe ngokugqibeleleyo phakathi kwabo, Oko kukuthi, nge umgama ofanayo. Ukuba sifuna ukulumka nangakumbi, sinako hambisa izinto.
Siyakukhuthaza ukuba uzame ukudlala ngeendlela ezahlukeneyo. Ukuba uziqhelanisa uya kufumana ubuchule obaneleyo bokusebenzisa esi sixhobo kwaye ugcine ixesha emsebenzini wakho. Uya kuqinisekisa fumana iziphumo zoyilo ezicocekileyo kunye nokuqwalaselwa kweenkcukacha.
Mgeni kwaye usasaze!
]]> https://www.creativosonline.org/herramienta-alinear-y-distribuir.html/feed 0 Isishwankathelo esilula malunga neelayisensi ze-Creative Commons https://www.creativosonline.org/licencias-creative-commons.html https://www.creativosonline.org/licencias-creative-commons.html#respond Mon, 04 Mar 2019 09: 26: 52 +0000 https://www.creativosonline.org/blog/?p=48097
Nangona kukho ezininzi Imithetho ekhusela amalungelo obunini kwimisebenzi, Kunzima ukulawula kwaye ngakumbi ukuba sibhekisa kwinethiwekhi. Ababhali abaninzi bavumela abanye abasebenzisi ukuba basebenzise imisebenzi yabo phantsi kweemeko ezithile. Le miqathango iphawulwe Iilayisensi zeCreative Commons. Bayasivumela kwaye basiqinisekise ngamalungelo omxholo.
Itotali iyonke Iindidi ezintandathu ezahlukeneyo zelayisensi ye-Creative Commons. Ukuba unomdla wokwazi okungakumbi malunga nesihloko, musa ukuyeka ukufunda kuba siza kukunika isishwankathelo esilula ngalo mbandela. Unokuxhamla kokubini ukuba ungumbhali ofuna ukwabelana ngemisebenzi yabo, okanye kwelinye icala, ungumsebenzisi ofuna ukusebenzisa izinto ezivela komnye ngelixa uhlonipha iimeko.
Yintoni iCommon Commons?
Njengoko besesitshilo kwisithuba esedlule, i-Creative Commons imalunga ne- Umbutho ongenzi nzuzo. Ime eCalifornia, eUnited States. Zinikezelwe Ukuqinisekisa ababhali beziqwenga ezahlukeneyo imida yokuxhaphaza imisebenzi yabo okanye indalo kwi-Intanethi. Kwelinye icala, ivumela abasebenzisi ukuba basebenzise ngokusemthethweni iiprojekthi okanye imisebenzi yabanye, ukuba nje iilayisensi ziyahlonitshwa.
Kukho ezahlukileyo iintlobo zeelayisensi Uyilo oluqhelekileyo. Inkqubo ye- iisimboli ezahlukeneyo ezibonakalayo zinxulunyaniswa nelayisensi nganye kwaye, ke ngoko, iimvume ezahlukeneyo ezithi zivunyelwe nganye nganye kuzo. Siza kubabona ngezantsi ukuze bazi ukuba basinika ntoni.
Iilayisensi ze-Creative Commons
Njengoko bebabiza, iilayisensi ziqulathe "iileya" ezintathu. Okokuqala, sifumana umaleko wokuqala esiya kuwufumana kulo naliphi na iphepha-mvume: Ikhowudi yeLegal. Njengokuba ingengabo bonke abasebenzisi abanolwazi ngezomthetho, uluhlu lwesibini "iSivumelwano esiqhelekileyo" okanyeEfundekayo umntu".
La Umaleko wokugqibela welayisensi ngulowo unakanwa yisoftware. Isetyenziselwa ukwenza kube lula kwiWebhu ukufumana imisebenzi phantsi kwelayisenisi yeCreative Commons. Inguqulelo kule meko iya kuba "Umatshini uyafundeka".
Ezi layisenisi zineeparameter ezahlukeneyo ezinokudityaniswa kunye. Sibona ngezantsi:
Isabelo (BY): Eli phepha-mvume livumela abanye ukuba basebenzise umsebenzi okoko nje ukubhalwa kwendalo yoqobo kuvunywa. Ingasasazwa, ixutywe, isetyenziselwe iinjongo zorhwebo phakathi kwezinye iinjongo. Ngamafutshane, umsebenzi unokusetyenziswa, kodwa ucaphula umbhali.
Yabelana ngokufanayo (BY-SA): Ukusebenzisa imisebenzi phantsi kwelayisenisi kubalulekile ukukhankanya umbhali kwaye banelayisensi imisebenzi yabo emitsha phantsi kwemiqathango efanayo, kufuneka bafane.
Ngaphandle komsebenzi ovelisiweyo (BY-ND): Kule meko, umsebenzi ungasetyenziselwa, oko kukuthi, ukwabiwa kwakhona, ukuthengiswa okanye akunjalo, ngokude kungagqitywanga kwaye kudluliselwe ngokupheleleyo. Ewe kunjalo, evuma umbhali.
Ukungasebenzisi urhwebo (BY-NC): Ikuvumela ukuba uguqule umsebenzi kwaye wakhe omnye ukusuka koqobo, kodwa ukuba injongo yayo ayisiyorhwebo.
Ezi ezine zangaphambili zezona ziphambili, kodwa kukho ezimbini ezingaphezulu ezidibanisa iimfuno, ezizizo esiza kuzichaza apha ngezantsi.
Iimvume ezingakumbi, ezona zithintelo
Okulandelayo, siza kuchaza iilayisensi ezimbini ezisele, ezi zidibanisa iimfuno ezichazwe apha ngasentla. Masibazi:
Ukungathengisi-Akukho msebenzi uvela (BY-NC-ND): Yeyona layisenisi ithintelayo kunazo zonke. Isivumela kuphela ukuba sikhuphele umsebenzi kwaye sabelane ngawo ixesha elide ukuba umbhali amkelwe kwaye angaguquki. Kananjalo, ayinakuba yeyorhwebo.
Ukungathengisi-Akukho msebenzi uvela (BY-NC-SA): Eli phepha-mvume lisivumela ukuba sixubeke, silungelelanise kwaye senze kulowo msebenzi wokuqala ukuba ayisiyiyo eyorhwebo. Kuya kufuneka uvume umbhali kwaye unike nelayisensi efanayo kulo msebenzi mtsha.
]]> https://www.creativosonline.org/licencias-creative-commons.html/feed 0 Fumana eyona bhanki yemifanekiso isimahla https://www.creativosonline.org/descubre-los-mejores-bancos-de-imagenes-gratuitas.html https://www.creativosonline.org/descubre-los-mejores-bancos-de-imagenes-gratuitas.html#respond NgoLwesibini, 12 Feb 2019 22: 18: 11 + 0000 https://www.creativosonline.org/blog/?p=47836
Imifanekiso esiyisebenzisela iiprojekthi zethu kufuneka ibe ye umgangatho ophezulu kakhulu, silungelelanise iimfuno zethu. Ukuba awunazo izibonelelo zakho, ungakhathazeki, ukusukela sikubonisa ezinye iibhanki zemifanekiso yasimahla ukuze ufumane esona siphumo sibonakalayo
Kucacile ukuba Iibhanki zemifanekiso ehlawulelweyo zibonelela ngesibonelelo esingaphezulu izixhobo, kodwa ngamanye amaxesha uhlahlo-lwabiwo mali alufikeleli kuthi, okanye akufanelekanga ngokuba nezinye iindlela ezingenalungelo lokushicilela. Ukongeza, ukuba umxholo ngowomsebenzi okanye ibhlog yakho yobuqu, izixhobo esiza kukubonisa zona apha ngezantsi ziya kuba ngaphezulu kokwaneleyo kolu hlobo lweprojekthi kwaye ziya kuba ngaphezulu kokugubungela iimfuno zethu.
Ilayisenisi yeCreative Commons CC0
El Commons Creative Yi Umbutho ongenzi nzuzo. Ime eCalifornia, eUnited States. Bazinikele ekuqinisekiseni ababhali bamacandelo ahlukeneyo ukuxhaphaza imida yomsebenzi wabo okanye indalo kwi Internet. Kwelinye icala, ivumela abasebenzisi ukuba basebenzise ngokusemthethweni iiprojekthi okanye imisebenzi yabanye, ukuba nje iilayisensi ziyahlonitshwa.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zamaphepha-mvume Uyilo oluqhelekileyo. Iimpawu ezibonwayo ezahlukeneyo zinxulunyaniswa nelayisensi nganye kwaye, ke, iimvume ezahlukeneyo ezo zivunyelwe nganye nganye.
Kwiiwebhusayithi esikunika zona, uninzi lweefayile ze-iilayisensi unyana CC0. Imalunga nelayisensi I-Creative Commons Zero. Kule meko, onke la malungu ngaphandle kwamalungelo agciniweyo. Oko kuthetha ukuba bavela Indawo kawonke wonke kwaye ungazisebenzisa phantse ngaphandle kwemiqathango. Kufuneka kukhunjulwe ukuba banomda othile, nokuba ubuncinci. Umzekelo, ukusetyenziswa kwayo akuvumelekanga nakweyiphi na indawo enobundlobongela okanye yabantu abadala.
Le bhanki yemifanekiso ibalasele, kwaye isinika into eninzi ngendlela simahla. Yibane Uluhlu olubanzi lweefoto ezivumela ukuba le ndawo ibe nezinto eziphezulu. Njengoko besesikuxelele ngaphambili, imifanekiso yakho inelayisensi UZero oQhelekileyo woBumba (CC0).
Pexels Inesibonelelo esikhulu kuba yindawo yokungena enikezelwe kuyo ukuqokelela imifanekiso evela kwezinye iibhanki zemifanekiso yasimahla kwiwebhusayithi efanayo.
Singakuqinisekisa oko Unsplash yenye yezona bhanki zemifanekiso zinemvume ilungileyo yeCC0 kwi-Intanethi namhlanje. Imifanekiso yakho ekumgangatho ophezulu ngaphandle kweendleko. Ukongeza, kwaye kubaluleke kakhulu, banokukhula okungapheliyo okusivumela ukuba sifumane izinto ezintsha kwaye sihlaziye rhoqo.
Elinye inqaku lale portal yinyani yokukwazi ukucofa umbhali kwaye ukwazi ukubona yonke imisebenzi yabo kwangoko. Oku kunokuba yinzuzo kuthi xa sifuna ukuba zonke izinto eziyiliweyo zilandele umgca wokubonakalayo ofanayo.
Le bhanki yomfanekiso ine Uluhlu olubanzi lwezinto ezikumgangatho ophezulu. Unobungcali ngokwenene kwaye phakathi kwemifanekiso yakhe, ubume bendalo kunye nobume bendalo. Icala elisezantsi esalifumanayo lelo ayizizo zonke izixhobo abasibonisa zona ezinelayisensi phantsi kweCC0.
Sithanda ukugxininisa ukuba, kuphando lwakho, thina ivumela ukuhluzwa ngeeparameter ezahlukeneyo bathanda:
Njengoko zichaziwe, iFreepik sisango “Izixhobo zemizobo zomntu wonke ”. Xa sisithi "Wonke umntu" unesizathu esilula, ukongeza kwimifanekiso banazo ezinye izixhobo eziluncedo kakhulu. Lakhe nikela Inje ngolu hlobo lulandelayo:
Ukongeza, kwiinjini yokukhangela sinokukhetha ngqo phakathi simahla okanye izinto zepremiyamu. Unoluhlu olubanzi lwezinto esinokuzisebenzisa kwimeko enye, ukukhankanya umbhali ngokufanelekileyo. Kwelinye icala, ukhetho lokuhlawula, umnxeba wePremiyamu lixabiso eliphantsi ngokulinganayo. Ukuhlawula a Isixa esimalunga ne-9 ye-euro ngenyanga unokufikelela kwizibonelelo ezininzi kwaye ngaphandle kwesidingo sokukhankanya umbhali.
También ukho Iibhanki zemifanekiso ezikhethekileyo kwicandelo, kule meko, yi iqonga le-resource-centric apho ukutya kuvela khona. Isithembiso sisenokungabi sikhulu kakhulu, kodwa kufanele kuqatshelwe ukuba imifanekiso esemgangathweni kunye nobungcali kwimifanekiso yabo ibalasele. Ukuba siyayazi indlela yokusebenzisa izibonelelo kwaye sinobuchule singafezekisa iziphumo ezigqwesileyo.
]]> https://www.creativosonline.org/descubre-los-mejores-bancos-de-imagenes-gratuitas.html/feed 0 Iiphikseli zokutya nguYuni Yoshida https://www.creativosonline.org/pixeles-de-comida-por-yuni-yoshida.html https://www.creativosonline.org/pixeles-de-comida-por-yuni-yoshida.html#respond Wed, 02 Jan 2019 16: 09: 14 + 0000 https://www.creativosonline.org/blog/?p=47744
Yuni yoshida Yiyo UMlawuli wezobuGcisa wobuzwe baseJapan. Kwiminyaka nje engamashumi amathathu anesine ubudala, uye wayiguqula intengiso kunye neyakhe ingqondo yokuyila.
Sifuna ukuqaqambisa, phakathi kwezinye izinto ezininzi ezisaphilayo, umsebenzi womlawuli wobugcisa waseJapan, u-Yuni Yoshida, owadala nge Uchungechunge lwe-surreal yemifanekiso ekubonakala ukuba ingqokelela yokutya ibikho ipikseli eyenziwe ngesandla.
Okungakumbi malunga negcisa
AmaJapan Yuni yoshida wafunda kwiYunivesithi yaseJoshibi yoBugcisa kunye noYilo ngaphambi kokuba asebenze ngeendlela ezahlukeneyo arhente zentengiso. Babo eyona logres intle bahamba kunye nomphathi wobugcisa odumileyo UTakuya onuki.
Uthotho lwakhe olutsha "Pixelated"
Umsebenzi owenzileyo ngeli xesha ubukhona iipikseli zokutyaOko kukuthi, uzinikele kuye ukubola ukutya kubanika iipikseli ezihambelana nombala. Idibanisa imihlaba emibini, leyo yokutya kunye nehlabathi ledijithali, kwaye njengoko ubona, i isiphumo Ngokuqinisekileyo inomdla kwaye ihambelana.
Olu luhlu lutsha lubizwa ngokuba "Ipikseli”. Nangona ekuboneni kokuqala kubonakala ngathi yenziwe ngekhompyuter, ayifani njalo. Bahambe ngocoselelo ukusika iityhubhu nokutya kwakho kwaye zibekwe ngobuchule ukufezekisa umphumo wombala onqwenelekayo. Kucacile ukuba yi Umsebenzi ocekeceke kakhulu, Yobunzima obukhulu kwaye efuna umonde kunye nokubetha okubonakalayo.
Ngokomculi ngokwakhe, uxela ngala mazwi ukuba ufuna ukucaphukisa umbukeli: "Ndifuna abantu bacinge, izinto zohluke kwaye zikhuthazwe."
Lo mlawuli wezobugcisa ukwazile ukufumana indawo kwihlabathi lipapashwa ngumbulelo kuye ubuchule obukhulu y Ukucaphukisa imisebenzi yakhe.
Ukuba ufuna yazi ngakumbi malunga noYoshida unokufumanisa ngakumbi ngemisebenzi yakhe kwi iphepha lewebhu o Instagram. Uya kufumana olona luhlu lubalaseleyo kwaye ukuba siyayazi into eyinyani, yile abayi kukushiya ungakhathali.
]]> https://www.creativosonline.org/pixeles-de-comida-por-yuni-yoshida.html/feed 0 Fumanisa ubugcisa obuncinci bukaFabián Marcel Gaete https://www.creativosonline.org/descubre-el-arte-en-miniatura-de-fabian-marcel-gaete.html https://www.creativosonline.org/descubre-el-arte-en-miniatura-de-fabian-marcel-gaete.html#comments Ngomhla, nge-29 Dec 2018 19:18:34 + 0000 https://www.creativosonline.org/blog/?p=47738
Ngaba uyazi ubugcisa obuncinci? Ngeenkcukacha ezininzi, lo mculi wenza ubugcisa obukhethekileyo, UFabian Marcel, ukusukela ebuntwaneni ebekhe wanayo ukuthanda ukupeyinta. Intsapho yakhe iphela isebenzise ubugcisa kwiinkalo zayo ezahlukeneyo. UFabián walilandela eli siko, waqhubeka nomnqweno wakhe wobugcisa kunye nokupeyinta de wanayo ngengozi yayinzulu kangangokuba yayiyiyo unyaka omnye ngaphandle kokuziva okanye ukuhamba.
Emva kokwenza ukuhlaziya Ngaphezulu konyaka, engakwazi ukubona okanye ukuhamba, wagxila kuyo qeqesha ingqondo. Nje ukuba achache, uqhubeke nothando lokupeyinta.
UFabian Marcel wazalelwa eChile kwaye wafudukela eMalaga kwiminyaka eyadlulayo. Okwangoku igcisa lasezidolophini. Paint kwaye wenze ifayile yakho isebenza ngeminwe yakho. Ungamfumana nge Izitalato zaseMalaga, ihlala ibekwe emini ngo kwikona Cathedral.
Ithatha imizuzwana engama-30 ukwenza isakhelo
Ukumangalisa kukaFabian ekuthatheni imifanekiso kuyamangalisa. Kwinkqubo ye I-anthill wamenywa ukuba abonise izipho zakhe. Vula ikristali ukwazile ukwenza, ngokulungileyo imizuzwana embalwa, Umsebenzi wobugcisa onesihloko esithi "Ukuchukumisa imbonakalo yomhlaba." Eyona nto inomtsalane yile indalo azipeyinta ngayo. Uyakwazi ukucacisa i-nuance nganye ngelixa epeyinta.
Kuzo zonke izipho zakhe zobugcisa, unolwazi olulodwa phinda wenze umhlaba: iintaba, ulwandle, ukuphuma kwelanga.
Iimpawu zale nto
Ipeyinti ngeminwe yakho, nangezandla zakho. Ukutyikitya kwakhe, okuyifaka kuyo yonke imisebenzi yakhe, yintaka ephaphazelayo. Inqanaba le iinkcukacha okumangalisayo, kwaye ndincoma ukuba ujonge inkqubo yobugcisa bakhe. Ummangaliso!
Kuyamangalisa ukubona ukuba ijongeka kanjani, kwaye ngokwe uphononongo kwi-intanethi, yabakhenkethi bothuswe bubukrelekrele bakhe kunye nobugcisa, bema ngeyakhe amaxabiso aphantsi. Ngokomkhenkethi wase-Bhritane, wabahlawulisa ezintandathu kowethu yokupeyinta kunye ishumi kowethu yi dos.
]]> https://www.creativosonline.org/descubre-el-arte-en-miniatura-de-fabian-marcel-gaete.html/feed 1 Ulawulo lwemibala yokuprinta https://www.creativosonline.org/gestion-del-color-para-imprenta%c2%ad.html https://www.creativosonline.org/gestion-del-color-para-imprenta%c2%ad.html#respond Tho, nge-27 ngomhla weshumi amabini anesithandathu ka-2018 15:47:06 +0000 https://www.creativosonline.org/blog/?p=47723
Kubalulekile ukuba siyithathele ingqalelo into yokuba umbala wekhusi (RGB) ayibonakali ngokufanayo kwiphepha (i-CMYK). Ngaphambi kokuthumela iprojekthi yokugqibela ukuprinta kufuneka siqiniseke ukuba sikhona ukuthumela ngaphandle iifayile ezinemowudi yombala CMYK ukuze umbala wokugqibela sisondele kangangoko sinokubona kwiscreen.
Nokuba uthathela ingqalelo ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kwi-CMYK, zininzi izinto ezinokwahluka iziphumo zethu zokugqibela. Uhlobo lwephepha apho sikhetha ukuprinta, uhlobo lweekhatriji zombala, phakathi kwezinye izinto ezinokubangela uhlengahlengiso oluncinci.
El pantone ithathwa njenge isixhobo esisisiseko yeengcali zoyilo lwegraphic. Ngu-librería yemibala Oku kuyakuqinisekisa ukuba sinemibala efunwayo, oko kukuthi, sisalathiso sombala. Iifayile esizithumela ukuba siziprinte, nokuba zishicileli ezahlukeneyo, ziya kugcina umbala omnye.
Kukho zixhobo ze intanethi eya kukunceda uguqule imibala yoyilo lwakho lokuprinta.
Ngesi sixhobo sikwi-Intanethi unokusebenza ukwenza eyakho imilinganiselo kunye neephalethi zombala. Yi ivili lemibala apho unokuhamba phakathi kwemibala yayo, ii-inki kunye nezibane. Iyakuvumela zama ngokudibanisa kwakho.
I-Adobe ikwanamavili ayo ombala okusinceda ukuba sifeze umbala wethu ofanelekileyo. Ibe ilayibrari yepeyinti ekwabelwana ngayo iyafumaneka ngabasebenzisi ukuba basebenzise kwaye bagcine ukuba uneakhawunti ye-adobe.
Yiyo ulwandiso oluluncedo ngokwenyani oluya kukuvumela ukuba ukhethe nawuphi na umbala ngaphakathi kwiphepha lewebhu. Njenge-eyedropper kwinkqubo yethu yoyilo, colorzilla sazise ngokucofa kanye umbala kwangoko.
Ukuba ngu ukwandiswa, kufuneka uyikhuphele kwisikhangeli sakho. Iyafumaneka kuzo zombini chrome ukuba kunjalo Firefox.
Cela uvavanyo lombala
Ingcebiso ethi, ukuba awazi ukuba ikhona, inokukunceda ngokomsebenzi, kukucela enye uvavanyo lwemibala yasimahla. Oku kuyakusivumela thintela nayiphi na ingxaki ngolawulo lwemibala. Iiprinta ezininzi ziya kukwenzela zona ngaphandle kwengxaki.
]]> https://www.creativosonline.org/gestion-del-color-para-imprenta%c2%ad.html/feed 0